Tsy mazava intsony : tapatapaka ny jiro | NewsMada
Tsy mazava intsony : tapatapaka ny jiro
Mahavariana ! Tapatapaka matetika ny herinaratra eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Ny fisehony, tapaka tampoka ny jiro, ao anatin’ny fotoana fohy, saingy mateti-pitranga ary mandritra ny andro iray manontolo. Dia toy izay foana isan’andro, nefa tsy misy kotrobaratra na andro ratsy. Maro ireo mpanjifa nitaraina aty amin’ny tonian’ny gazety, satria manimba fitaovana sy kojakoja maro ao an-tokantrano sy fitaovam-piasana izany, indrindra ny orinasa madinika sy salantsalany, toy ny toerana fanaovam-bolo, mpikirakira vy (soudure), ny mpandrafitra hazo. Ho an’ity farany sady hanamarinana izany, ny haintrano mahatsiravina teny Ambohimangakely vokatry ny fikorontanan’ny famatsiana herinaratra (cour circuit). Raha ny tombantombana, hitan’ireo niharam-boina, hanamarina izany na tsia ny fanadihadiana.
Araka ny tatitra avy any amin’ny mpanjifa koa, tsy eto Antananarivo ihany io fahatapahana matetika io, fa hatrany amin’ny faritra maro eto amin’ny Nosy. Midika izany fa tsy mahazo antoka intsony ny mpanjifa amin’ny tolotra omen’ny Jirama.
Tsy manaiky ny mponina eny Behenjy
Ankoatra ireo, nanome toky iray volana ny filoham-pirenena, tamin’ny 8 janoary teo, hamindran’ny minisiteran’ny Angovo sy ny Jirama ary ny tompon’andraikitra voakasika, hamindrana ny toby mpamokatra herinaratra eny Antanandrano any amin’ny toeran-kafa. Dila tamin’ny 8 febroary ny fe-potoana iray volana, 24 febroary isika izao (maherin’ny iray volana sy tapany??!!), tsy vita ny iraka nampanaovina, fa mbola ao anatin’ny “andrana” ny tompon’andraikitra. Fantatra fa hafindra eny Ambohimanambola sy Behenjy ireo gropy 52 eny Antanandrano. Ho an’ny eny Behenjy, napetraka ny gropy telo, lazaina fa mihataka ny tanàna, nefa tsy izay ny zava-misy fa tabataba sy setroka ny tsapa eny an-toerana. Mitsipaka ny hametrahana azy eny ny mponina eny Behenjy. Tsy misy koa ny fanadihadiana ara-tontolo iainana (EIE), araka ny voafaritry ny lalàna, raha tena tiana ho hita maso tokoa ny fanjakana tan-dalàna. Mahamenatra!